मलेसिया सरकारले जनवरी देखी छापा हान्ने चेतावनी, डिसेम्बर ३१ सम्म छुट ! - jagritikhabar.com
मलेसिया सरकारले जनवरी देखी छापा हान्ने चेतावनी, डिसेम्बर ३१ सम्म छुट !
“त्यसपछि, अ’वैधानिकहरूलाई नि’यन्त्रण गर्न ठूलो मात्रामा छा’पा अपरेशन हुनेछ,” हमजाहले यहाँ मानव संसाधन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा भने।
मानव संशाधन मन्त्री दातुक सेरी एम. सरावननसँगको संयुक्त भेटपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा दुई भागहरू थिए – श्रम र स्वदेश फिर्ता।